Waxaan tijaabinay Tineco iFloor 3 iyo A11 Master + nadiifiyeyaasha, faakiyuumka iyo xoqida oo aan lahayn fiilooyinka | War gadget
Waxaan tijaabinay laba ka mid ah badeecadaha Tineco: iFloor 3, faakiyuumka iyo xoqida sagxadaha waxqabad aan caadi aheyn, iyo A11 Master +, oo leh ismaamul heer sare ah iyo dhammaan noocyada qalabka lagu daro sanduuqa.
1 Tineco iFloor 3: wasakhda iyo xoqida
Tineco iFloor 3: wasakhda iyo xoqida
Nadiifiyeyaasha faaruqinta fiilooyinka aan xadhkaha lahayn ayaa beddelay fikradda ah sida aan u isticmaalno noocan ah qalabka guryaha. Had iyo jeer gacanta oo diyaar u ah in la isticmaalo xitaa xilligan ugu lama filaan ah, oo aan lahayn fiilooyinka qasan oo si fudud loo maamuli karo. Laakiin maxaa dhacaya marka waxa dhulka ku dhaca ay ku jiraan dareere? Kawaran haddii, marka lagu daro nadiifinta walxaha adag, aan dooneyno inaan ku xoqno dabaqa? Hagaag, taasi waa meesha saxda ah ee Tineco iFloor 3 nadiifiye-nadiifiyaha ah uu ka soo galo, maxaa yeelay waa meel-nadiif ah oo isku daraysa astaamaha nadiifiyaha faakiyuumka oo xoog leh oo xaaq ah oo ka tagi doonta dusha sare ee aad nadiifisay dhalaalaya.
Iyada oo sifooyinka ugufiican aad ka codsan karto aalad ka mid ah qaybtaan, nadiifiyahan fayadhowrka iFloor 3 ayaa sidaas noqda oo dhan oo kaamil ah guri kasta:
Mashiinka 150W ee nadiifinta faakiyuumka nadiifka ah ee buuqa badan iyo hooseeya (78 dB)
Madax-bannaanida 25 daqiiqo oo leh batari 3000mAh oo dib loo soo celin karo oo dib u buuxiya 4 saacadood
600ml haanta biyaha
500ml taangiga wasakhda ah
Habka is-nadiifinta marka uma baahnid in gacmahaagu wasakh noqdaan
Amraya iyo saldhig is-nadiifinta
Shaashad dijitaal ah
Nidaamka shaandhada seddexaad, oo leh miiraha HEPA (oo ay ku jiraan bedelkiisa)
Waxaa ku jira dareere nadiifiye si loogu daro biyaha iyo qalabka lagu nadiifiyo
Mid ka mid ah waxyaabihii sida aadka ah iiga welwelay markii aan arkay nooca faakiyuumka ayaa ahaa nadaafaddiisa. Isku darka wasakhda iyo biyaha waligood fikrad fiican kuma ahan nadiifinta faakiyuumka, mana aanan ogeyn sida tan wax looga qaban doono iFloor 3. Sikastaba, waqti dheer iguma qaadan in aan ogaado, maxaa yeelay mahadsanid taangiga labajibaaran (nadiif ah oo wasakh ah) wareegga laba-geesoodka ah ee lagu daray, Wasakhda waligeed ma gaadho meel kale oo ka mid ah faakiyuumlaha ka baxsan haanta qashinka.
Isticmaalkeedu waa wax fudud sida buuxinta taangiga biyo nadiif ah, ku darista daboolka xalka nadiifinta, ka saarista salka lacag bixinta iyo riixida batoonka. Nadiifinta ka dib isticmaalkeedu ma ahan mid aad u dhib badan, waa inaad faaruqisaa haanta biyaha wasakhda ah, nadiifi oo ku celi meeshiisii. Nidaamka is-nadiifinta ayaa sidoo kale nadiifiya rullaluistemadka iyo madaxa faakiyuumka., inkasta oo haddii aad rabto aad ka saari karto rullaluistemadka markii aad u baahan tahay inaad si fiican u nadiifiso. Ma aha qalab u baahan dayactir weyn in markasta la diyaariyo, waana wax la mahadiyo.
Shaashadda dhijitaalka ah ee ay sidoo kale ku jirto waa wax aan waxba tarayn, maadaama ay muujineyso xog muhiim ah sida batteriga haray, xawaaraha faakiyuumka (lagu xakameyn karo badhanka gacanta ku haya), xaaladda taangiyada iyo ciriiriga suurta galka ah ee nadiifinta, marka lagu daro marka nidaamka is-nadiifinta uu shaqeynayo. Hadday tan tahay waxaan ku dareynaa si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah inkasta oo aan u eg nahay nadiifiye ballaaran, iyo culeys aad u kooban Taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad meelkasta geyn karto, iFloor 3-kan waa qalab nadiifin oo aad u fiican gurigaaga.
Muuqaalka kale ee i welwelay wuxuu ahaa sida aan ula dhaqmi lahaa sagxadda guriga, taas oo aad u jilicsan inay tahay parquet alwaax ah. Dhib malahan, maxaa yeelay rullaluistemadka microfiber runti waa jilicsan yahay, iyo xoqidda ay sameyso waxay ka tagaysaa raad raad ah oo qoyaan ah oo ay ku qaadato kaliya dhowr ilbiriqsi in la qalajiyo. Waxaa loo isticmaali karaa ku dhowaad nooc kasta oo dusha sare ah: marble, alwaax, synthetic, linoleum, iwm. Soo-saaraha kuma talinayo in lagu isticmaalo roogagga ama dusha sare ee aad u qallafsan maadaama natiijada ugu dambeysa aysan noqon karin tan ugu habboon.
Kaliya "laakiin" waxaan ku dhejin karaa faakiyuum-nadiifiyaha waa kaas ismaamulkeeda ayaa ku filan oo kaliya inuu awood u yeesho inuu nadiifiyo guri ama dabaq cabbirkiisu caadi yahay, had iyo jeer waa lagama maarmaan in la sameeyo laba qaybood. Laakiin runtu waxay tahay sahlanaanta isticmaalka iyo natiijada ugu dambeysa ee ugu fiican waxay ka dhigaysaa dhibaatadan inay galaan asalka, taas oo ay tahay inaan ku darno dayactirka yar ee loo baahan yahay. Qiimaheedu waa € 329 on on Amazon (isku xirka)
Qalabka kale ee faakiyuumka aan fiilooyinka lahayn ayaa ah, priori, nadiifiye faakiyuum ah oo caadi ah inkasta oo ay jiraan waxoogaa yaab ah oo ku jira sanduuqa gudihiisa. Awoodda nuugista iyo madax-bannaanida weyn ayaa ah astaamaheeda ugu waaweyn, oo aan ku dari karno liis dheer oo qalab ah oo ku jira sanduuqa:
120W awood faaruq ah oo leh buuq yar
4 nidaamka miiraha, oo ay kujiraan miiraha HEPA
600ml taangiga wasakhda ah
Nadiifinta madaxyada leh nalalka LED-ka si loo iftiimiyo meelaha mugdiga ah
Saldhig kuleylinta oo leh meel loogu talagalay qalabka iyo xeedho dheeri ah oo loogu talagalay batteriga dheeraadka ah
Laba baytariyada 50 daqiiqo oo wadarta ismaamulka (25 × 2)
Laba madax oo dhameystiran burush jilicsan iyo burush nadiifin qoto dheer
Beddel miiraha microfiber
Madax yar oo loogu talagalay nadiifinta sharaabaadyada, gogosha, iwm.
Xusulka suxulka si loo gaaro aagag adag
Caday madaxyada, afka cidhiidhiga ah ...
Sidaad u aragto, way adag tahay in laga fekero wax aan ku jirin sanduuqa A11 Master +. Waxa ugu caansan waa batteriga laba-laabka ah, taas oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in saldhiggu leeyahay meel dheeri ah oo loogu talagalay batteriga labaad, wuxuu kuu ballan qaadayaa inaad had iyo jeer haysato 50 daqiiqo oo madax-bannaanid ah oo la heli karo, in ka badan oo ku filan nadiifinta guriga oo dhan. Intaas waxaa sii dheer, in batteriga la saari karo ay ka dhigan tahay in markii uu xumaado, aad iibsan karto batari kale oo aadan aheyn nadiifiye dhameystiran.. Madaxa laba-geesoodka ah ayaa sidoo kale la mahadiyey, halkaasoo noocyada kale ay ku siinayaan wax dheeraad ah, Tineco waxay dooratay inay waxyaabo noo fududeyso oo ay ku jirto laba madax, si midba midka kale loogu beddelo guji, iyadoon loo baahnayn in la kala furfuro rollers.
Faakiyuumka faakiyuumku waa mid dhaqaajin kara, oo si hagaagsan u maarayn kara xitaa hal gacan oo keliya, qalabyada kala duwan ee ballaadhan ee la socda ayaa kuu oggolaanaya inaad gaarto geeska ugu badan ee aan la geli karin ee gurigaaga: kabadhada hoostooda ama ka kor, inta u dhexeysa barkimooyinka fadhiga ama sariirta. shelf gadaashiisa adigoon ka saarin. Nadiifintu waa mid aad waxtar u leh, taangigana waa weyn oo ku filan inuu faaruqiyo dhamaadka.
Faakiyuum nadiifiyaha leh astaamaha ugu fiican ee aad ka heli karto qaybtiisa oo waliba ay ku jiraan wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga faa'iidaysato, oo ay ku jiraan batteri dheeraad ah. Shahaadada sharafta ma jiri lahayn boorso kale oo lagu kaydiyo dhammaan agabyada ku jira. La aqbali karo, iftiin, buuq yar iyo awood badan, Tineco A11 Master + waxaa laga iibsan karaa Amazon lacag dhan € 389 (isku xirka)
iFloor 3 iyo A11 Master +
La kici karo oo fududahay in la isticmaalo
Kaydka wasakhda badan
Saldhigyada oo lagu buuxinayo boosaska agabka
Madax-bannaani heer sare ah A11 Master +
Qalabka kaladuwan ee ballaaran oo lagu daray A11 Master +
Xuquuqda madax-bannaanida iFloor 3
Bacda wax lagu keydiyo ee alaabta lagu kaydiyo ayaa la qadarin doonaa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » Waxaan tijaabinay Tineco iFloor 3 iyo A11 Master + nadiifiyeyaal, faaruqin iyo xoqid la'aan fiilooyin.
Xidhitaanka Lectulandia: 5-ta beddel ee ugu fiican